တစ်ခါတုန်းက သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ ရုပ်အလွန် လှတဲ့သူ နှစ်ဦး ရှိခဲ့ ဖူးပါတယ်။ တစ်ဦးက အရှင်ဘယ လို.အမည်ရတဲ့ ရဟန်းငယ် ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးကတော့ အမတ်ကြီးရဲ့ သားပါ။ သူတို.နှစ်ဦး ဘယ်လောက်ထိ ရုပ်လှကြလဲ ဆိုရင် တစ်ခြားတစ်ခြား ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကုသိုလ် ကောင်းမူ. ပြုပြီး ဆုတောင်း ကြရင်တောင် ရဟန်းငယ်နဲ့ အမတ်ကြီးရဲ့ သားလို ရုပ်လှရပါလို၏ လို. ဆုတောင်းကြတဲ့ အထိပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ပုထုဇဉ်တို. ပီပီ ရဟန်းငယ်နဲ့ အကျွမ်းဝင်တဲ့ သူတွေရှိသလို အမတ်ကြီးရဲ့ သားနဲ့ အကျွမ်းဝင်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်မင်တော့ တရားခင် ဆိုတဲ့ အတိုင်း ရဟန်းငယ်နဲ့ ကျွမ်းဝင်သူတွေက ရဟန်းငယ်ရဲ့ ရုပ်လှမူ.ကို အားကျသလို သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ သူတို. ရဟန်းငယ်သာ အလှဆုံးလို့ မှတ်ယူထား ကြပါတယ်။ ဟိုဘက်က အမတ်ကြီးရဲ့ သားနဲ့ အကျွမ်းဝင် သူတွေကလည်း အမတ်ကြီးသားရဲ့ ရုပ်လှမူ.ကို အားကျသလို သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ သူတို. အမတ်ကြီးရဲ့သားသာ အလှဆုံးလို. မှတ်ယူထားကြ ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့တစ်နေ. ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ နှစ်ဘက် ဆုံဖြစ်ကြပါတယ်။ စကား စပ်မိစပ်ရာ ပြောကြရင်း စကားလမ်းကြောင်းက ဘယ်ကို ဦးတည် သွား ကြသလဲ ဆိုတော့ ရဟန်းငယ်နဲ့ ကျွမ်းဝင်သူ တွေက သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ ရဟန်းငယ်သာ အလှဆုံးလို. ပြောလိုက် မိပါသတဲ့။ ဒီတော့ ဟိုဘက်က အမတ်ကြီးရဲ့ သားနဲ့ အကျွမ်းဝင် သူတွေကလည်း သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ သူတို. အမတ်ကြီးရဲ့သားသာ အလှဆုံးလို. ပြန်ပြော လိုက်ပါသတဲ့။
နောက်ဆုံးတော့ စကားက ဒီမှာတင် ရပ်မသွားတော့ဘဲ ရဟန်းငယ်က ပိုလှတယ်။ အမတ်ကြီးသားက ပိုလှတယ်ဆိုပြီး နှစ်ဘက် အငြင်း အခုံ ဖြစ်ကြပါရောတဲ့။ ဒီနေရာမှာတင် အမတ်ကြီးရဲ့ သား အဖွဲ.ထဲက တစ်ယာက်က “ သတ္တိရှိရင် သင်တို. ရဟန်းငယ်နဲ့ ငါတို. အမတ်ကြီးရဲ့သား ဘယ်သူ ပိုလှတယ် ဆိုတာ အလှပြိုင်ကြမလား” လို. ထ စိန်ခေါ် လိုက်ပါသတဲ့။ ရဟန်းငယ်ရဲ့ အဖွဲ့ ကလည်း ဘယ် အ ညံ့ ခံမလဲ “စိန်လိုက်လေ” ဆိုပြီး ပြန် စိမ်ခေါ် လိုက်ပါသတဲ့။ ပြိုင်ပွဲ နေရာကိုတော့ သူတို. သီဟိုဠ်ကျွန်းရဲ့ အထင်ကရ တစ်နေရာ ဖြစ်တဲ့ မဟာစေတီ ကို သတ်မှတ် လိုက်ကြပါတယ်။ မိမိတို. ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ ရွှေတံဂုံ စေတီလို နေရာမျိုး မှာပေါ့။ ရဟန်းငယ်နဲ့ အမတ်ကြီးရဲ့ သား ရုပ်အလှ ပြိုင်ကြမယ် ဆိုတဲ့ သီတင်းဟာ သီဟိုဠ် တစ်ကျွန်းလုံး ပြန်.သွားပါတယ်။ ဒီအလှ ပြိုင်ပွဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးတွေ မသိအောင် လောင်းကြေးထပ်တဲ့ ၀ါသနာ အိုးတွေလဲ ပါချင်ပါမှာပါ။
ရဟန်းငယ်နဲ့ အမတ်ကြီးသားတို. အလှပြိုင်ပွဲမှာ အမတ်ကြီးသားဘက်က သူတွေက သူတို. လူကို အကောင်းဆုံး အ၀တ်အစား တွေ ၀တ်ပေးပြီး ပြိုင်စေခဲ့ သလို အလှပြိုင်ပွဲ သတင်း ကြားထားတဲ့ ရဟန်းငယ်ရဲ့ မယ်တော် ကြီးကလည်း သူ.သား ရဟန်းငယ်ဆီ အကောင်းဆုံး သင်္ကန်းကို သွားကပ်ပြီး “သားတော် မနက်ဖြန် ဦးခေါင်းကို ပြောင်အောင် ရိပ်ပြီးတော့ ဒီသင်္ကန်း ၀တ်ပြီး ပြိုင်ပါ” လို. ပြော ပါသတဲ.။
ရဟန်းငယ်နဲ့ အမတ်ကြီးရဲ့ သား တို. အလှ ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်သူ နိုင်သွားတယ် ဆိုတာ မပြောခင် သူတို. ဘာကြောင့် ရုပ်လှခဲ့ ကြတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကြားဖြတ် အနေနဲ့ အရင်ပြော ချင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဘ၀တစ်ခုမှာ ကျောင်းထိုင် မထေရ်ကြီး တစ်ပါးရယ်၊ ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ပေးနေတဲ့ ကပ္ပိယကြီး တစ်ယောက်ရယ် ရှိခဲ့ ဖူးပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦး နေ.စဉ် ပြုတဲ့ ကုသိုလ် တစ်ခုကတော့ ကျောင်းဝင်းထဲက စေတီတစ်ဆူမှာ မထေရ်ကြီးက တံမြက်လှည်းပြီး ကပ္ပိယကြီးက အမိူက် ကျုံးပစ်ပေးပါတယ်။ မထေရ်ကြီးက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ တံမြက်လှည်းခဲ့ သလို ကပ္ပိယကြီး ကလည်း မထေရ် ကြီးနည်းတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တက်တက်ကြွကြွ စေတနာပါပါနဲ့ အမိူက်ကျုံး ပစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကုသိုလ် ကြောင့်ပဲ သူတို. နှစ်ဦးထဲက တံမြက်လှည်းခဲ့တဲ့ မထေရ်က ရုပ်အလွန်လှတဲ့ ရဟန်းငယ်ဖြစ်ပြီး အမှိုက် ကျုံးပစ်ပေးခဲ့တဲ့ ကပ္ပိယကြီးက ရုပ်အလွန် လှတဲ့ (အမတ်ကြီး ရဲ့ သား) သူငယ် ဖြစ်လာခဲ့ ရတာပါတဲ့။
အတိတ်ဇာတ်ကြောင်း သိသွားပြီဆိုတော့ ရဟန်းငယ်နဲ့ အမတ်ကြီးရဲ့ သားတို့ အလှပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်သူ နိုင်သွားတယ် ဆိုတာ ချစ်တဲ့ စာဖတ် ပရိသတ်တွေ ခန်.မှန်း လို.ရသွားရောပေါ့။
စာဖတ်သူ ဖြေကြည့်ပေး ပါဦး ဘယ်သူ အနိုင်ရသွားတယ် ဆိုတာ ။
အတိတ်ဘ၀က တံမြက်လှည်း တဲ့သူ ရဟန်းငယ်က အနိုင် ရသွားပါတယ်။ ဒီဝတ္တုလေး နဲ့ အတူ ချစ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေ အတွက် ဓမ္မလက်ဆောင် လေးလည်း ပူးတွဲ ထည့်ပေး လိုက်ပါရစေဦး ။ ရှေးဆရာတွေ စီကုံးထားတဲ့ တံမြက်လှည်း ရကျိုး လင်္ကာလေးပါ၊ ကျက်ထားလိုက်ပါဦး။
သူများစိတ်ကြည်၊ ကိုယ်စိတ်ကြည်နှင့်၊ တစ်လီနတ်ချစ်၊ ရောင်လှစ်ဆင်းလှ၊ သေကာလမှာ၊ ရောက်ရနတ်ပြည်၊ ဤငါးထွေသည်၊ မှတ်လေ တံမြက်လှည်း ခြင်း အကျိုးတည်း။
တံမြက်လှည်းပြီးလို. ပုံထားခဲ့တဲ့ အမှိုက်တွေကို ကျုံးပစ်ရင်း “ရဟန်းငယ်က တံမြက်လှည်းခဲ့လို. ရုပ်လှတာတဲ့.၊ အမတ်ကြီးရဲ့ သားက အမှိုက်ကျုံးပစ် ပေးခဲ့လို. ရုပ်လှတာတဲ့၊ အင်း….. ငါက နှစ်မျိုးလုံး လုပ်တာဆိုတော့ တန်ပြန် သက်ရောက်မူ. သဘောအရ ဆိုရင် ငါက နှစ်ထပ်ကွမ်း အလှပေါ့ ” ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အတူ ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်ပြုံး ဖြစ်လိုက် ပါသေးတယ်။ ဒုတိယ အပြုံးရဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာဘဲ တတိယ အပြုံးကို ဆက်ပြုံး ဖြစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
အကြောင်းက …… နှစ်ဘက်လုံးရဲ့ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်လေတော့ မိမိ တစ်ယောက် တည်းများ အလှပြိုင် ပွဲ ကျင်းပနေမိမှဖြင့် …..။
(ရဝေနွယ် - အင်းမ)
၁။ ပရိဝါ အဋ္ဌ ကထာ - စာမျက်နှာ (၁၇၅)
၂။ သီဟိုဠ်ခတ်စံတော် ၀င် အရိယာ များ၊
စာမျက်နှာ - ၄၀၃၊ ၄၀ရ (ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင်)